အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၃) - ဥပဒေကို အသုံးချ | mmshare
၁၅ − လူတွေ သိဖို့ အချိန်မတန်သေးဘူး
ဒီစကားဟာ သိပ်မှန်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ဘယ်အရာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သိဖို့၊ လက်ခံဖို့ အမြဲတမ်း အဆင်သင့် မဖြစ်တတ်ကြပါဘူး။ အဆင်သင့် ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကို စောင့်နေရင်လည်း နောက်ကျသွားမှာပါ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ လူတိုင်း ကြုံနေရတဲ့ ဖြစ်ရပ် တစ်ခုပါ။
ကိုယ့်မှာ ယုံကြည်ချက်တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေပြီးသားဆိုရင် ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို တခြားသူတွေ လက်ခံအောင် စည်းရုံးလို့ ရပါပြီ။ တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ယောက်ကနေ စပြီး စည်းရုံးပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ တကယ် စစ်မှန်ပြီး၊ အမှန်တရားနဲ့ ကိုက်ညီဖို့၊ အစမ်းသပ်ခံနိုင်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှလည်း လူတွေက ရေရှည်ယုံကြည် လက်ခံပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်ရှာတဲ့နေရာမှာ၊ ဖောက်သည်တွေကို စျေးရောင်းတဲ့ အခါမှာ၊ ကိုယ့်ဝန်ဆောင်မှု၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို စျေးကွက်တင် ရောင်းချတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊ ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ရဲ့ အရည်အသွေးကို အပြည့်အဝ သိရှိ လက်ခံ ယုံကြည်ထားမှ ဖောက်သည်တွေကို ကိုယ့်ဆီကဝယ်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။ ရောင်းနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်က ရေရေရာရာ မသိတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ရေရှည်မှာ ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁၆ − ဥပဒေကို သိအောင်လုပ်ပါ။ အသုံးချပါ။
ဥပဒေဆိုတာ သိအောင်လုပ်ထားရမယ့် အရာတွေပါ။ ဥပဒေကို မသိချင်ယောင် ဆောင်လို့မရသလို အလွဲသုံးစား လုပ်လို့လည်း မရပါဘူး။ တကယ်တော့ ဥပဒေဆိုတာ စည်းကမ်း အကြီးစားတွေပါ။ တစ်ခုစီကို သေသေချာချာ လေ့လာ၊ သိရှိ နားလည်ထားရင် − စီးပွားရေးပဲလုပ်လုပ်၊ လူမှုရေးပဲ လုပ်လုပ် မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ဥပဒေကို အတိအကျနားလည်ထားတဲ့အတွက် ဘောင်ထဲနေလုပ်တဲ့၊ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်လို ဥပဒေကို နားမလည်ထားတဲ့ သူတွေ မလုပ်ရဲတဲ့ စွန့်စားမှုတွေကိုလည်း လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ်ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုလုပ်နိုင်ရတယ် ဆိုတဲ့ အကာအကွယ်ကိုလည်း ပြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်လေ့လာ၊ ကြိုတင် ကာကွယ်ထားပါ။
ဥပဒေဆိုတာ ကြောက်စရာ၊ ရှောင်ပြေးစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးချစရာပါ။ ဥပဒေဆိုတာ သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွား ပါပဲ။
၁၇ − အရင်က တစ်ခါမှ မလုပ်ဘူးလို့။
"ငါ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး" ဆိုတဲ့ စကားဟာ လူအတော်များများရဲ့ လက်သုံးစကား တစ်ခွန်းပါ။
အဲဒီစကားမှာ နောက်ဆက်တွဲ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့က "အဲဒါကြောင့် အခုလည်း မလုပ်တော့ဘူး" ဆက်ပြောပါလိမ့်မယ်။
စွန့်စားရတာကို နှစ်သက်သူတွေကတော့ "တစ်ခါလောက်တော့ စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်" လို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝမှာ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးပေမယ့် လုပ်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက တချို့ကတော့
- ကျောင်းစတက်ခြင်း (အရင်က တစ်ခါမှ ကျောင်းမသွားဖူးပါ။)
- ပထမဆုံး အနမ်း (သင် အရင်က တစ်ခါမှ မနမ်းဖူးပါ။)
- ကားမောင်း သင်ယူခြင်း။
- အားကစား အသစ်/ဝါသနာ အသစ်တစ်ခု စတင်ခြင်း။
- စာဖတ် စသင်ခြင်း။
အလုပ်တစ်ခုကို တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးသေးရင်တော့ အဲဒါ အသစ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုကို ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကြောက်နေလို့ မရပါဘူး။ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးသေးလို့ ဆိုပြီး နောက်တွန့်နေလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်က ဘေးထွက်ထိုင်တာနဲ့ အဆင်သင့် ဝင်ယူသွားမယ့်သူတွေက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီးပါ။ ဒါ အမှန်တရားပါပဲ။
တကယ်တော့ ဒီစကားဟာ ဘာမှန်းမသိတာကို တွေးကြောက် (fear of the unknown) ရာကနေ စတာပါ။ တစ်ခါမှ စမလုပ်ဖူးတာ ကြောက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး၊ ငါ့မှာ အတွေ့အကြုံ မရှိခဲ့ဘူး လို့ နောင်မှာ ပြောရတာက ပိုဆိုးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝဟာ တစ်ကယ်တော့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတာတွေနဲ့ ပြည့်နေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် မလုပ်ဖူးတာ တစ်ခုခု ကောင်းရာကောင်းကျိုးတစ်ခုကို စပြီးလုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မကျ ပါစေနဲ့။
၁၈ − ဒါကိုယ်သိတဲ့၊ နားလည်တဲ့ အပိုင်း မဟုတ်ဘူး
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ နားမလည်တာတွေ အများကြီးပါ။
မသိ နားမလည်တာတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့နည်း နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ ပထမနည်းကတော့ − မသိတာကို ပိုပြီး သိအောင် လေ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယနည်းကတော့ − တကယ်သိတဲ့သူ၊ တော်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို ရှာပြီး ကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ သုံးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ တစ်ယောက်ထဲနဲ့ အားလုံး မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလို လုပ်စရာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ အစုအစပ် လုပ်ငန်းတွေဟာ တကယ်တော့ အရည်အသွေး မတူတဲ့ လူနှစ်ယောက် အတူတူလက်တွဲ လုပ်ခဲ့ကြရက စဖြစ်တာ များပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်မကျွမ်းကျင်ရင် ပိုကျွမ်းကျင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူကို ရှာပါ။ အသုံးချပါ။
၁၉ − ငါ့မှာ စာဖွဲ့ပြောရလောက်စရာ ဘာမှ မရှိလို့ပါကွာ
တခါတရံမှာ ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ အစွမ်းအစဟာ လူမသိ၊ သူမသိ ဖြစ်နေတတ်တာ၊ ထင်ပေါ်ပေမယ့် စင်တော်က အကောက်မခံရတာမျိုး ကြုံဖူးမှာပါ။ အထူးသဖြင့် မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါတတ်တဲ့ လောကသဘာဝ ကြီးစိုးနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုသိသာပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ သင့်ဘက်ကလည်း ကိုယ့်အစွမ်းအစကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးနည်း တစ်ခုကတော့ အတော်ဆုံးဆိုတဲ့ ပြိုင်ဘက်ကို တရားနည်းလမ်းကျကျ စိန်ခေါ်ဖို့ ပါပဲ။
လူအများစုက လမ်းမှန်ကန်းမှန်အတိုင်း လျောက်နေတဲ့အခါ အမှားတစ်ခုခု လုပ်လိုက်တဲ့သူတွေ ထင်ပေါ်လာတာ ဒီသဘောပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ လူတစ်ယောက်ယောက်က အမှားအယွင်းတွေပဲ လျောက်လုပ်ပြနေပြီဆိုရင် အဲဒီနောက်ကွယ်မှာ အကြောင်းတစ်ခုခု ရှိနေပြီဆိုတာ သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးတွေ လူပျိုပေါက် အပျိုပေါက်တွေက မိဘနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အာရုံစိုက်တာကို ခံချင်တဲ့အတွက် ပေါက်ကရတွေ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ လျောက်လုပ်ပြတာ မြင်ဖူး၊ သတိထားဖူးရင် ဒီစာပိုဒ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ဈေးကွက်တင်တဲ့အခါ အဲဒီကလေးတွေရဲ့ နည်းဗျုဟာကို ပါးနပ်လိမ်မာစွာ အသုံးပြုဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၂၀ − သူတို့က ပိုကံကောင်းတယ်။
ကံ = အလုပ် လို့ သင့်အနေနဲ့ ခံယူထားနိုင်တယ် ဆိုရင် သူများတွေက သင့်ထက်ပိုကံကောင်းတယ် ဆိုတာကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါလည်း သူတို့လို ကံကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာကိုပဲ တွေးမိမှာပါ။ အကြောင်းရင်းကတော့ ကံကောင်းတယ် ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ မမြင်ရတဲ့ အားထုတ်မှုတွေ၊ ကြိုးစားမှုတွေ ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကံကောင်းတယ်လို့ အများက ပြောကြတဲ့ သူတွေရဲ့ အားထုတ်မှု၊ ကြိုးစားမှုတွေကို လေ့လာ အတုယူ အသုံးချမယ်ဆိုရင် သင်လည်း တစ်ချိန်မှာ ကံကောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။
နောက်ထပ် သိထားရမယ့် အချက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရမယ် ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူ တစ်ဦးရဲ့ ကံကောင်းခြင်းဟာ သင့်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရတဲ့ သဘာဝကို နားလည် ယုံကြည်လက်ခံထားဖို့ လိုပါတယ်။
တကယ်တော့ ကံကောင်းတယ် ဆိုတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်တဲ့သူတွေပဲ ရှိပါတယ်။
‹ အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၂) - သူတို့ကြောင့်လား up အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၄) - မိဘတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပါ ›
aungmin (not verified)
Wed, 02/08/2012 - 05:01
thanks! I want to advised you about the book, Who Move My Cheese. That likes Tommy Walker's book. It is about the changes of life and how can we do for this and how prepare. So i think discuss this book for user . This has been translated book.
Sun, 02/19/2012 - 05:22
Thanks for the Wish bro
Dear Ko Aung Min
Thanks for your wish. I know the book "Who Move My Cheese".
It is translated to Burmese as "ငါ့ဒိန်ခဲကို ဘယ်သူ နေရာရွှေ့ထားတာလဲ" by "ဆရာ ခင်မောင်မြင့်".
I will try to read the original as well as translated and will discuss in this site as you suggested.
Thanks again for reading & enjoying the articles here and droppingakind comment. :)
Updated Download link for "ငါ့ဒိန်ခဲကို ဘယ်သူ နေရာရွှေ့ထားတာလဲ" by "ဆရာ ခင်မောင်မြင့်"